NIYAD-JAB: Man United Oo Si Rasmi Ah Uga Baxday Suuqa Iibka, Jose Mourinho Oo Ka Hadlay, Pogba Oo Halis Ku Jira Iyo Gudaha Old Trafford Oo Tibaaxo Kala Duwan Kasoo Baxayaan - GOOL24.NET
NIYAD-JAB: Man United Oo Si Rasmi Ah Uga Baxday Suuqa Iibka, Jose Mourinho Oo Ka Hadlay, Pogba Oo Halis Ku Jira Iyo Gudaha Old Trafford Oo Tibaaxo Kala Duwan Kasoo Baxayaan
August 9, 2018 Cabdiwahab Ahmed
Suuqa iibka ciyaartoyga ayaa kooxaha waddanka Ingiriiska ka xidhmi doona caawa fiidka, waxaana ay saacadaha kooban ee u hadhay ay naadiyadu ku dedaali doonaan inay helaan laacibiinta qaabka fudud ay ku heli karayaan maadaama aanay haysanin wakhti ku filan oo ay saxeexyo waaweyn ku doontaan.
Manchester United oo la filayey inay suuqa ugu yaraan hal saxeex oo muhiim ah ka samayso maanta, ayaa gebi ahaanba ka baxday dhaqdhaqaaqa raadinta ciyaartooyada, waxaana sidaas ku dhowaaqay tababare Jose Mourinho oo shaaciyey in aanay wax ciyaartoy ah soo iibsanin doonin maanta oo uu xidhmayo suuqa iibku.
United oo inntii uu suuqu furnaa saddex ciyaartoy oo kali ah soo gadatay, ayaan heli doonin wax ka badan Fred, Diogo Dalot iyo goolhaye Lee Grant oo intuba ku cusub, waxaana ay ka hadheen difaaca Leicester City ee Harry Maguire iyo Toby Alderwireld oo Tottenham ah, kuwaas oo diiraddu u saarnayd intii ka dambaysay Koobka Adduunka.
Maalmihii u dambeeyey waxa United lala xidhiidhinayey difaacyahannada Barcelona iyo Bayern Munich ee Yerry Mina iyo Jerome Boateng, hase yeeshee midkoodna ma iman doono sida uu tababare Jose Mourinho shaaciyey.
“Kalsooni kuma qabo in ciyaartooyo cusub yimaaddaan, sababtoo ah suuqu maanta ayuu xidhmayaa, ugu yaraana waa inaan joojiyo inaan ku fikiro ciyaartooyo cusub, sababtuna waa in suuqu uu xidhmayo.” Sidaas ayuu Jose Mourinho oo ay ka muuqatay inuu ka niyad-jabsan yahay sida aany kooxdiisu ugu soo iibinin ciyaartooyo uu hore u dalbaday.
Mourinho oo ka hadlayey shir jaraa’id oo uu maanta ku qabtay magaalada Manchester, waxa uu tilmaamay in uu kaliya ku fikiri doono ciyaartooyada uu haysto, waxaanu yidhi: “Waxa aan diiradda saarayaa ciyaaryahannada aan haysto, inaan isku xidho dhawrka ciyaarood ee ugu horreeya oo qaadan karta illaa saddex kulan, sababtoo ah kaddib ciyaarta Spurs waxa la gelyaa fasax, toddobaadyo dhawr ah kaddibna dadku way soo kaban doonaan, markaa waxa muhiim ah inaan ku xisaabtamo ciyaartoyga aan hayso kulanka ugu horreeya.”
Manchester United ayaa kulankeeda ugu horreeya ee horyaalka Premier League waxay Jimcaha la ciyaari doontaa Leicester City, hase yeeshee waxa ka maqnaan doona Sergio Romero, Antonio Valencia, Marcos Rojo, Ander Herrera, Nemanjja Matic iyo Dalot oo dhamaantood dhaawacan.
Paul Pogba oo bixitaan lala xidhiidhinayo iyo Jesse Lingard oo toddobaadkan kasoo laabtay fasaxii Koobka Adduunka ayaa ay ku adkaan doontaa tababaruhu inuu ciyaarsiiyo, waxaanay u badan tahay inay kursiga kaydka fadhiistaan.
“Pogba iyo Lingard waxay soo laabteen Isniintii, tababarkii ayaanay qaateen Isniintii, Salaasadii, Arbacadii iyo maanta, waanad qiyaasi kartaa in aanay weli caafimaad qabin oo aanay diyaar ahayn, laakiin waanu u baahanahay.” Sidaas waxa yidhi tababare Mourinho oo tibaaxay inay suurtogal tahay in aanay ciyaarin.